warkii.com » Waa Tan Sababta Uu Halyeey Ian Wright U Diiday In Shaxda Arsenal Lagu Soo Bilaabo Bukayo Saka Iyo Eddie Niketiah
Xog: Shaqada Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo hakad gashay + Sababta
Waa Tan Sababta Uu Halyeey Ian Wright U Diiday In Shaxda Arsenal Lagu Soo Bilaabo Bukayo Saka Iyo Eddie Niketiah
Halyeeyga Arsenal Ian Wright ayaa aaminsan in Mikel Arteta u soo safo ciyaartoy khibrad leh kulanka finalka FA Cup ee ay maanta la ciyaarayaan Chelsea islamarkaana uu u ogolaado Bukayo Saka iyo Eddie Nketiah inay saameyn ka soo yeeshaan kursiga keydka.
Saka oo 18 sanno jir ah ayaa kooxda koowaad ka mid noqday bartamihii xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna ka mid ahaa xiddigaha ugu fiicnaa kooxda xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay seddex gool islamarkaana sameeyay 11 caawin tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Da’ yarkaan ayaa soo gabagabeeyay dhowr bilood oo shaki la gelinayay mustaqbalkiisa isagoo horaantii bishii hore saxiixay qandaraas muddo dheer ah, xilli ay si dhow u la socdeen kooxaha Manchester United iyo Liverpool.
Da’ yarka kale Nketiah oo 21 sanno jir ah ayaa isna kooxda koowaad ka mid noqday bilihii ugu danbeeyay, wuxuuna cadaadis saarayaa Alexandre Lacazette iyo Nicolas Pepe.
Weeraryahankii hore ee Arsenal Ian Wright ayaa sheegay inay labada xiddig ee da’da yar inay la qabsan karaan ciyaar walba laakiin waxa uu kula taliyay Arteta inuu ku soo bilaabo Lacazette iyo Pepe si ay u afka hore ugu caawiyaan Aubameyang.
“Waxaan qabaa inuu khibrad dooran doono sababtoo ah haddii aad ku soo bilowdo Saka ama Eddie, la yaabna iguma noqon doono inuu Saka ku soo bilaabo sababtoo ah waxa walba uu iska difaaci kara si la mid ah Eddie laakiin haddii aad xiddig da’ yar ah ku soo bilowdo kulan final ah oo wax walba ay noqon waayeen sidii la rabay lana bedelo ciyaarta oo socota, waxay dhaawaci doontaa ciyaartoyda iyo sida ay dadku u garsoorayaan marka uu ciyaarayo kulamada waa weyn.
“Aniga ahaan waxaan ku soo bilaabi lahaa kursiga keydka, sababtoo ah aniga xitaa waxaan fadhiyay keyd kulankii Palace sannado ka hor, aad ayaan ugu faraxsanaa inaan bedel ku soo galay, waxaana ahaan ciyaaryahan da’ ahaan weyn, waxaad dareemeysaa inaysan jirin wax aad lumiso.
“Wax inaad faa’ido ma ahee, qasaaro kaama soo gaareyso. Haddii aad soo gasho oo aad kala duwanaansho sameyso dadku waxay kugu amaanayaan inaad ciyaarta wax ka bedeshay, si la mid ah haddii aad soo gasho oo aad dhaliso gool”
Ra’iisul wasaaraha Lubnaan oo is-casilay, kadib qaraxyadii BeirutAugust 11, 2020